Nahazo Aingam-panahy Tamin’ny Fomba Nentim-paharazana, Mirona Amin’ny Fomba Fitsaboana Natoraly Ny Taovam-pananahany Ireo Vehivavy Any Amerika Latina · Global Voices teny Malagasy
Voadika ny 05 Janoary 2016 14:39 GMT
Vakio amin'ny teny عربي, Español, русский, Français, Deutsch, Italiano, Català, Ελληνικά, English
Vehivavy, vatana mainty. Sary nalaina tao amin'ny kaonty Flickr an'i Franck Réthoré, nampiasàna fahazoandàlana Creative Commons.
Ao anatiin'ny fiarahamonina amin'izao fotoana izao, miatrika firoboroboana firehana ara-tsosialy sy koltoraly isika ho an'ireo vehivavy izay manapaka fifandraisana amin'ny vatany. Raha toa ka tokony hianatra ny hamantatra ny zavatra mitranga ‘ao ambany ao’, aleon'ireo vehivavy mihaino ireo dokotera sy mpivarotra fanafody, tsy mahalala akory fa mety ho hitany amin'ireo zava-maniry manodidina azy anie ireo fanafody tadiaviny.
Any Amerika Latina, misy fahaterahana vaovao nanomboka tamin'ny endrika ‘fitsaboana natoraly ny resaka mifandray amin'ny taovam-pananahana’. Ampidirin'ireo vehivavy ho amin'ny fiainany andavanandro maoderina ireo fampianarana tany aloha momba ny fomba fiahiana tena samirery. Tsy hoe miverina fotsiny mandray an-tànana indray ny vatany ireo vehivavy ireo, fa koa mandray an-tànana ireo fomba nentindrazan-dry zareo araka ny nandraisan'izy ireo ny fampianarana nifampitampitàna isan-taranaka.
Mampiasa ny media sosialy ho sehatra hanaparitahana ny teny, mbola manohy maka ny sain'ny lafivalon'ny tany ilay fomba fitsaboana natoraly ny resaka mifandray amin'ny taovam-pananahana. Nampiasa ny Facebook, Instagram ary Twitter ireo nientanentana, miaraka ireo pejy sahala ny Mulheres da Terra (Vehivavin'ny Tontolo), Ginecologia Natural ( fitsaboana natoraly ny resaka mifandray amin'ny taovam-pananahana) ary Parir con Placer (Miteraka an-Kafaliana) mba hanorina vondrom-piarahamonina ao amin'ny Aterineto, hamporisihana ireo vehivavy mba hampiasa ireo fomba nentim-paharazana, hizara amin'ny hafa ireo zavatra niainany ary hiresaka ny mombamomba ny vatan'ny vehivavy mba hiezahana ny hanàla ny resaka fadifady manodidina ny fitaovam-pananahan'ny vehivavy.
Manome safidy hafa amin'ny fampiasana fanafody amin'ny fiainan'ny olona io hetsika io, ary mandrisika ireo vehivavy mba hikaroka ny fifandraisan'ny saina, vatana ary ny tontolo. Manomboka amin'ny fampiasàna zavamaniry sy fakan-javamaniry mba hitsaboana ireo fery, ka hatramin'ny fianarana mikasika ny fifandraisan'ny fihodin'ny volana sy ny fadimbolana, manainga ireo vehivavy mba hamerina ho eo an-tànany indray ny vatany ireo pejy ireo.
Boky Fampidirana Amin'ny fitsaboana natoraly ny resaka mifandray amin'ny taovam-pananahana, an'i Perez. Sary nampiasaina ambany fahazoandàlana Creative Commons.
Pabla Pérez San Martín, no vehivavy Shiliana iray amin'ireo fàka niforonan'ireo vondrom-piarahamonina ireo, ny tetikasa Ginecología Naural. Vao haingana izy namoaka boky mitondra ny lohateny hoe ‘Manual Introductorio a la Ginecología Natural’ (Boky Fampidirana amin'ny fitsaboana natoraly ny resaka mifandray amin'ny taovam-pananahana). Nitombo tany ambanivohitr'i Valparaíso, Shily, fony mbola zaza i Pabla dia nampianarin'ny renibeny mikasika ny tany sy ireo fitsaboany natoraly. Rehefa nitombo izy, nanomboka fikarohana manerana an'i Amerika Latina i Pabla, izay nifanenany taminà vondrona vehivavy teratany izay nizara ny fahaizany sy ireo zavatra niainany niampitampita tamin'ny lovan-tsofina.
Manolotra lahatsoratra sahala amin'ny hoe “Mampitombo ny fitiavako hanao firaisana ny fadimbolako“, “Avy amin'ny vatana mankany amin'ny fàka” ary “Tsiranoky ny fivaviana: Mpiaro mangina“. Manazava izy fa tsy mankahery ireo olona hiala amin'ireo manampahaizana amin'ny fitsaboana akory ilay tetikasa, fa kosa mba hahafantatra ireo fitsaboana rehetra azo atao ary mba hanana fahaizana fototra momba ilay resaka.
Tena manan-kery lehibe tokoa ny fahalalàna ny tena; manome antsika fitaovana sy fahalalàna fahiny izay navela an-jorombala na mety adino mihitsy aza io. Ny fahitàntsika antsika, ny fahatsapàntsika antsika ary ny fahafantarantska ny vatantsika avy amin'ny alalan'ny masontsika samirery, ivelan'ireo fepetra napetraky ny fiarahamonina, izany rehetra izany afaka hanampy antsika mba hahatsapa sy hanome lanja ary hianoka tsara ny fiainantsika ny resaka firaisana ara-nofo.
Raha mety mirohotra any amin'ny mpivarotra fanafody ireo vehivavy maro vantany vao mahita fisehonà aretina amin'ny fivaviana, i Pabla indray mandrisika ny hampiasàna tongolo gasy na “yaourt” natoraly mba hitsaboana an'ilay aretina, ary ny fàkan'ny hydraste hiadiana amin'ny mangidihidy rehetra. Raha toa ka tokony hisasa amin'ny savony mahery setra, maninona raha mampiasa rano masaka vita avy amin'ny ravinà voaroy, fàka-nà sakamalaho vao avy noloarana ary voniny sy ravina avy amin'ny zavamaniry “yarrow”? Nisy famoronana iray noresahany sy lasa malaza be erantany dia ny kaopin'ny fadimbolana, nofaritana ho toy ny ‘fomba iray ara-pahasalamana, madio, mampahazo aina ary miaro ny tontolo iainana, mihoatra noho ny “tampons” sy fitaovana fampiasa amin'ny fadimbolana’. Manome torolalana amin'ny fomba fanamboarana manokana ny lamba fampiasa amin'ny fadimbolana manaja ny tontolo iainana mihitsy aza izy.
‘Zafikelin'ireo mpilalao ody tsy vitanareo nodorana izahay’. Sary ampiasaina ambany fahazoandàlana Creative Commons
Amin'ny famerenana indray ny fahasalaman'ny fivaviana amin'ny fàkany, manome mihoatra noho ny lesona ireo vondrom-piarahamonina momba ireo tombotsoan'ny fitsaboana natoraly ny fivaviana — eo ihany koa ny fifanakaikezana amin'ny famindràna ny fahendrena amin'ireo andian-taranaka mifandimby, amin'ny fanazavàna sy famporisihana ireo vehivavy.
Lahatsoratra iray ao amin'ny bilaogy Ginecología Naural manazava hoe:
Tsy mila fanampiana ara-panafody ireo vehivavy raha resaka fahasalamany ara-pananahana, ho an'ny fitadiavany zanaka, hiaina fiainana izay malalaka sy ara-pahasalamana. Izany no niainana ary mbola mitohy ho zavamisy ho an'ireo vehivavy maro avy amin'ireo lafivalon'ny tany, toy ny an'ireo vondrom-piarahamonina Quichua sy Shuar ao amin'ny ala mikitrok'i Amazonia, izay matetika ireo vehivavy no miteraka irery, amin'ny ankamaroan'ny tranga tsy mila mpampiteraka, tsy marary, tsy matahotra, tsy didiana, tsy misy maty